अर्थमन्त्रीलाई गगनकाे चुनौति: एक पटक नेपाल घुमौँ, एक जनामात्रै सन्तुष्ट खोजौँ - हिमाल दैनिक
अर्थमन्त्रीलाई गगनकाे चुनौति: एक पटक नेपाल घुमौँ, एक जनामात्रै सन्तुष्ट खोजौँ
संमृद्धिको हावादारी परिकल्पनामा नीति र कार्यक्रम बरालियो। बरालिएको नीति तथा कार्यक्रममा अलमलिएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आउने बजेट घस्रीएला कि उफ्रीएला?
३० बैशाख २०७६, सोमबार १७:४१
सम्माननीय सभामखु महोदय,
नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको पाँचवर्षसम्म हलचल नहुने पूर्ण बहुमतको सरकार छ। र माननीय बाबुराम भट्टराइले कम्युनिष्ट नरहेको घोषणा गरिसक्नु भएपश्चात यो भन्दा अलमलिनु परेन नेपालको कम्युनिष्ट मध्ये अर्थतन्त्र को सम्बन्धि सबैभन्दा बढि जानेको, पढेको व्यक्ति अहिले नेपालको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ।
यस्तो अनुकूलता भएको सरकार, यस्तो विद्धान अर्थमन्त्री, भ्यागुता जस्तो उफ्रने अर्थतन्त्रको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो।
गएको एक वर्षमा के भयो त? मन्त्रीजीको दाबी छ, एकवर्षमा गज्जब भयो। संघीयता कार्यान्वयन उत्कृष्ट रह्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच बढ्यो। काम र रोजगारीमा बृद्धि भयो। गरिव वर्गको उत्थान भयो। आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक काम भयो। बजेट अनुशासनको पालना भयो, सुशासन र विकासको वर्ष यो रह्यो। राम्रै राम्रो भयो, हरेक दिन एक कदम सरकारले चालेको हुनाले गर्दा जनतामा खुशीयाली छायो।
म विनम्रतापूर्वक सम्माननीय सभामुखमार्फत माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई चुनौतिकासाथ भन्न चाहन्छु, एक पटक नेपाल घुमौँ। प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म, विद्यार्थी, शिक्षक, मजदूर, किसान, उद्यमी, उद्योगी, व्यवसायी, नयाँ, पुरानो, कसैलाई पनि भेटौँ र सोधौँ कि यो वर्ष नेपालमा मेरा निम्ति सुखद वर्ष रह्यो भन्ने एक जना मान्छे तपाईले मलाई भेटाइदिनुहोस्।
मेरो कुरा सुनेर माननीय अर्थमन्त्रीजीले पक्कै भन्नु हुन्छ, अर्थतन्त्रको कुरा यसरी मनोगत ढंगले गर्ने होइन। तथ्याङ्कमा गर्नुहोस्। एकपटक तथ्याङ्क हेरौँ। एकातर्फ लक्षित राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। अर्को तर्फ आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ।
नौ महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च हुन सकेको छैन। निर्यातको अनुपातमा आयात तपाइकै पालामा १४ बाट १६ गुणा पुगेको छ। बजेट घाटा बढ्दो छ। भुक्तानी सन्तुलनमा चाप बढ्दै गएको छ।
अर्थमन्त्रीलाई गगनकाे चुनौति
एक पटक नेपाल घुमौँ, एक जनामात्रै सन्तुष्ट खोजौँसंमृद्धिको हावादारी परिकल्पनामा नीति र कार्यक्रम बरालियो। बरालिएको नीति तथा कार्यक्रममा अलमलिएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आउने बजेट घस्रीएला कि उफ्रीएला?
Posted by Himal Dainik on Monday, May 13, 2019
पहिले वर्ष, दुई वर्षमा देखिने वित्तिय क्षेत्रको तरताको अभाव हरेक दुई÷तीन महिनामा देखिन थालेको छ। भएका उद्योगहरु बन्द हुन थालेका छन्। नयाँ उद्योगको कुरै नगरौँ। देश भित्रको निजी क्षेत्रको लागत मात्र होइन, निराशा पनि बढेको छ।
तपाइले फेरि भन्नु होला, तथ्याङ्क यसरी हेर्ने होइन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिमा हेर्नुहोस्। आठ प्रतिशतको लक्ष्य थियो, ६.८ प्रतिशत, त्यसको नजिक नजिक हामी पुगेका छौँ। त्यो पनि कृषि क्षेत्रमा मनसुन र खासगरीकन पुननिर्माणमा काष्ठ सामाग्रीहरुको प्रयोगको कारणले गर्दा त्यसले गरेको योगदान र सँधै जस्तो आयातमा आधारित सेवा क्षेत्रमा भएको मार्जिनल ग्रोथको कारणले गर्दा देखिएको बृद्धि। औद्योगिक क्षेत्रमा झन ओरालो लागेको छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भएको होइन। हामी कसैले गरेर भएको होइन। यो बाह्रय कारणले गर्दा भएको हो। यो दिगो छैन। यो दिगो रहदैन।
अनि यसको आधारमा यो एक वर्षमा हामीले चमत्कार भयो भन्नु पर्ने र अर्थमन्त्रीले जादु गर्नु भयो भनेर भनिदिनु पर्ने?
कम्युनिष्टमा आत्मआलोचनाको खुबै चर्चा हुने गर्दछ। आत्मआलोचना कमजोरीको संकेत होइन। उच्च परिपक्वताको संकेत हो। मैले गर्न खोजेँ तर, सकिन। अब यो पटक गर्छु, सुधार गर्छु भन्ने ठाउँबाट माननीय अर्थमन्त्रीजीले सुरु गर्नु भएको भए सायद हामी ठिक बाटोमा जान्थ्यौँ होला।
समिक्षा ठिक ढंगले नगर्नु भएको हुनाले गर्दा १६ वटा सिद्धान्त र २६ वटा प्राथमिकता अलमलिएको छ। सन्तोषजनक आर्थिक बृद्धि भयो अब यसलाई दुई अंकको बनाउनु पर्छ। माथिदेखि तलसम्म हामी त्यहि रटान देख्छौँ।
हामीलाई दुई अंकको आर्थिक बृद्धि होइन, संरचनागत परिवर्तन गरेर विप्रेषणमा आधारित, उपभोगमा आधारित हाम्रो इकोनोमीलाई लागत र निर्यातमा आधारित त्यो बृद्धिको ठाउँमा हामीले पुर्याउँनु पर्नेछ।
१५ वटा भन्दा बढि देशहरुले २५ वर्षसम्म सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कसरी गरे भन्ने कुरा, भारत र चीन यसमा आएर कसरी जोडिए भन्नेबारे राम्रो अध्ययनहरु भएको छ। त्यसले सिकाएका केहि कुराहरु छन्। कतिपय हाम्रो आफ्नो विशेषताहरु छन्। हाम्रो जनसंख्याको आफ्नोे विशेषता छ, जो अझै केहिवर्षसम्म तन्देरी रहन्छ, त्यसपछि बुढ्यौली लाग्दछ। हाम्रो भूअवस्थितिको आफ्नो केहि विशेषताहरु छ, हाम्रो प्राकृतिक प्रकोपको आफ्नो जोखिमहरु छन्। हामीले रोजगारी श्रृजना गर्नु पर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले हाम्रो बृद्धिलाई नै समावेशी बनाउनु पर्नेछ।
हाम्रो असमानता र गरिवीमात्र समस्या होइन। हामीसँग स्रोत र साधन पनि छैन। हामीसँग भएको सबै स्रोत र साधन परिचालन गरेतापनि हाम्रो लक्ष्य हामीले भेटाउन सक्दैनौँ। हामीलाई लगानी चाहिएको छ। लागनी कहाँबाट ल्याउने? कसको ल्याउने? कसरी आउँछ?
हामीले गएको वर्षसँग तुलना गरेरमात्र हुँदैन। दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी आउने देश मध्ये रहेको नेपालले अरु देशसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने? नेपाल जति अनुदारवादी हुँदै जान्छ त्यति लगानी आउने सम्भावना घट्दै जान्छ। त्यसतर्फ हामी सचेत रहने कि नरहने?
चालू खर्चलाई स्थिर कसरी राख्ने? पूँजीगत खर्च भएन भनेर यत्रो वर्ष भन्यौँ। त्यसको गुणात्मक फड्को कसरी मार्ने त्यसको एक एक अध्ययन भएको छ। एउटा एउटा समस्याको निधान के हो भन्ने थाहा पाएका छौँ। त्यसमा काम गर्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने?
राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा हामी सीमामा पुगेका छौँ। यसमा नविनता लिएर आएनौँ भने यो यहिँ जमेर बस्छ अब। करिब करिब ४५ प्रतिशत हाम्रो राजस्वको हामीले इम्पोर्ट गर्ने सामानमा लाग्ने ड्युटी र ट्याक्समा आधारित भएको छ। यसमा नविनता कसरी ल्याउने?
हाम्रो अगाडि समस्या छ। र सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो औद्योगिकरणको विषय, हामीले यो सन्दर्भमा प्रस्थान गर्न सकेनौँ भने सम्माननीय सभामुख महोदय भने, हामी जहाँको त्यहि अड्कन्छौँ।
सरकारले गर्नै पर्ने केहि कुराहरु छन् र गर्नै नहुने केहि कुराहरु छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनसँग हामी कसरी जोडिने? ग्लोबल भ्यालु चेन र रिजनल भ्यालु चेनमा हामी कसरी जोडिने? हामीले के उत्पादन गर्ने के उत्पादन नगर्ने? निजी क्षेत्रसँग काम कसरी गर्ने? स्मल एण्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेजलाई नेपालमा अरु सजिलो वातावरण कसरी बनाउने? उद्यमशिलता र अन्वेषणको वातारण कसरी बनाउने? जसले गर्दा नेपाल औद्योगिकरणको बाटोमा जान सकोस् र त्यो सेक्टरले नेपालको ग्रोथलाई लिड गरोस्।
हामी यो विषयमा छलफलै गर्न चाहँदैनौँ। सिद्धान्तमा समस्या देखिएपछि क्षेत्रगत कार्यक्रममा के गर्ने के नगर्ने भन्ने मेसो नपाउने भन्ने कुरा स्वभाविकै हुने भयो।
शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले एब्सेन्टीज्मको पनि होइन। ड्रपआउटको पनि होइन। कक्षाकोठामा सिकाइको हो। सरकार साक्षरता अभियानमा अलमलिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा त सम्माननीय सभामुख महोदय, आधारभूत स्वास्थ्य, आकस्मिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्य विमाको फरक के हो भन्ने सम्म पनि भेउ नभएको नीति र कार्यक्रम मैले देखेँ, फेरि यसपटक पनि यहि कुरा यहाँ दोहोर्याइएको छ। कृषिमा त्यहि कुरा रटान छ। औद्योगिकरण गर्ने, व्यवसायिकरण गर्ने, यान्त्रिकिकरण गर्ने, विशिष्टीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने।
कृषिमा हामी आत्मनिर्भर, हामीहरु निर्यात, आयात, खपतको आधारभूत कुराहरुमा अलमलिएका छौँ। नेपालमा हिँजोको भन्दा उत्पादन घटेको होइन, हाम्रो उपभोग बढेको छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हामीले नराखीकन हामी पहिला असाध्यै एक्सपोर्ट गथ्र्यौँ, अहिले घट्यौँ भनेर रुने काम जताततै देखिन्छ।
त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, संमृद्धिको परिकल्पना हावादारी भएको हुनाले गर्दा नीति र कार्यक्रम बरालियो। नीति र कार्यक्रम बरालिएको हुनाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता झन अलमलियो। अब बजेट कस्तो आउला, घस्रेला कि उफ्रेला हेर्न बाँकी छ।
(विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै व्यक्त विचार)
Prevपछिल्लोलुम्बिनी, पशुपतिनाथ र जनकपुरलाई जोड्ने सर्किट आवश्यक
अघिल्लोकार्यकर्तालाई संयमित रहन उपेन्द्रको पार्टीको निर्देशनNext